Mba aiza ihany ny anay? | NewsMada
Mba aiza ihany ny anay?
Telo andro sisa, higadona ny fetin’ny Noely. 10 andro izany dia hivalona ny taona 2016. Efa miomana amin’ny fety ve ny vahoaka? Samy manana ny havaliny izay ny tsirairay. Ny fety misy isan-taona. Toraka izany koa ny fahasahiranana isan-tokantrano.
Fa mitovy ny tamin’ny taon-dasa ve? Asa aloha. Ny iaraha-mahita sy iaraha-maheno eny rehetra eny, milaza azy ho sahirana avokoa ny rehetra. Izay afaka sy te himenomenona aloha, fa misy ary maro koa ny milamindamin-tsaina amin’izao fotoana izao. Ny azy aza ny fety, efa natombony mialoha!
Tsy vao izao anefa no nisy ny fiangarana, na ny tsy fitoviana eo amin’ny tsirairay. Manomboka hita miharihary kosa anefa ny hantsana manasaraka ny manana amin’ny faraidiny. Iny vita ihany, fa miha makadiry koa ny elanelana eo amin’ny mpitondra mifehy sy ny vahoaka entina!
Tsy afa-mitraka amin’ny ady amin’ny fiainana andavanandro ny vahoaka. Manampy trotraka ny resa-politika efa manempotra azy. Toa heno amin’ny haino an-jery fa nahazo volabe i Madagasikara. Toa hoe nahazo doka sy nahazo loka fa nipoapoaka ny fandraisam-bahiny, farany teo.
“Mba aiza ny anay?”, hoy ny be vazivazy. Sangisangy zary tena tokoa anefa, satria fotoana ilaina izany mihitsy izao. Raha misy vola tokoa, ka nomena an’i Madagasikara sy ny Malagasy, omeo ny anjaran’ny rehetra. Tetikasa ve? Fampandrosoana maharitra? Tsinjo lavitra? Ho an’ny taranaka? Eny, tsy misy mandà izany, saingy raha noana ny kibo, mivezivezy ny fanahy.
Raha voky amin’ny anjaran’ny hafa koa anefa, lany fanahy…
Zo ny Aina Randriatsiresy.